မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: February 2010
ယနေ့(ရဗီအွလ်အောင်ဝလ်လ) ၁၂-ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာ့မွတ်စ်လင်မ်အပေါင်း ချစ်ကြည်မြတ်နိုးရပါသော တမန်တော်မြတ် မုဟာမ္မတ်
(ဆွ.အ.ဝ) ၏မွေးနေ့ဖြစ်သောကြောင့် ဒီပို့စ်ကိုတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Detail : http://islam-yaungche.blogspot.com/2009/03/blog-post_14.html
Watch video : http://islam-yaungche.blogspot.com/2009/02/100.html.
Posted by Ordinary person at 1:18 AM No comments:
The fact of creation documentary ဗီဒီအို နဲ့အတူ သောကြာနေ့ ခုသ်ွဗဟ်ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သောကြာနေ့ ခုသ်ွဗဟ် ၅/၂၀၁၀
GRATEFULNESS (PROPHET SULAIMAANT & THE ANT) ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းတို့သည်စကြာ
ဠာလောကခပ်သိမ်းအားပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသောအနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာမြတ်အလ္လာဟ် အတွက်သာဖြစ်တော်မူပါ၏။ ထိုအရှင်မြတ် စေလွှတ်တော်မူသောလူသားအလင်းပြနဗီတမန်တော်အပေါင်းနှင့်နောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အဖြာဖြာသက်ရောက်ပါစေ။
ညီနောင် ညီအစ်မအပေါင်းတို့ခင်ဗျား---(အတ်စ္စလာမုအလိုင်းကွန်း၊ ၀ရဟ်မသုလ်လါးဟိ၊ ၀ဗရကားသုဟ်)ဒီအပတ်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျေးဇူးတရားသိတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကို တင်ပြလိုပါတာယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ “ကုဖ်ရ်”´ဆိုတဲ့သဘောမှာ
ကိုယ့်အပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျေးဇူးတရားကို မသိတတ်တာလည်းမကောင်းဘူး။ ကျေးဇူးကန်းတာကတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတရားသိတတ်ခြင်း (Shukr ရှုက်ရ်) ဟာ လူ့ကိုယ်ကျင့်တရားမှာအရေးကြီးပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို တမန်တော်စူလိုင်မာန်နဲ့ ပုရွက်ဆိတ်ကလေးရဲ့သာဓကကိုအကြောင်းပြုပြီး တင်ပြလိုပါတယ်။
တမန်တော်မူစာ(အလိုင်)ဟာ အီဂျစ်ရဲ့ကျွန်ဘ၀ရောက်နေခဲ့တဲ့ အစ္စရေးလ်လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးဆိုင်းနိုင်းကျွန်းဆွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ အလ္လာဟ့်ဘက်ကထူးဆန်းတဲ့ကူညီမှုတွေလည်းရခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အစ္စရေးလ်လူမျိုးတွေဟာအနှိုင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ရာမြတ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူး၊ တမန်တော်မူဟာ(အလိုင်)နဲ့ တမန်တော်ဟာရွန် (အလိုင်)တို့ရဲ့ကျေးဇူးကို လစ်လျူရှုပြီးရွှေနွားရုပ်သွန်းလုပ်ပြီးကိုးကွယ်မှု၊အရက်သေစာသောက်စားမှုစတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဖေါက်ဖျက်မှုတွေပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ ထူထောင်ဖို့ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ပါပျောက်ဆုံးပြီး တမန်တော်မူစာ(အလိုင်)ကို ``အလ္လာဟ်နဲ့ အသင် ရန်သူတွေကိုသွားတိုက်ကြပါ။ ပြီးမှ ငါတို့ကိုခေါ်ပါ´´လို့တောင် တာဝန်မဲ့တဲ့စကား၊ စော်ကားတဲ့စကားမျိုးတွေ ပြောလာခဲ့ကြတဲ့အတွက် အလ္လာဟ်ကသူတို့ကို နှစ်ပေါင်း(၄၀) ကန္တာရထဲမှာ ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ မိမိရဲ့တမန်တော်တွေကိုလည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ (ကုရ်အာန်၊ ၂၀း၈၆-၉၇)
ဒီလိုနဲ့ ကျေးဇူးကန်းပြီး အမှန်တရားကို မလိုလားတဲ့မျိုးဆက်တစ်ခု ကျော်လွန်ပြီး မျိုး ဆက်သစ်ထဲမှာတမန်တော်ဒါဝူဒ်(အလိုင်)ကိုပေါ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်။အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာမြတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဒေသတစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တမန် တော်ဒါဝူဒ်(အလိုင်)ကွယ်လွန်တဲ့အခါ သားတော်တွေထဲကစုလိုင်မာန်(အလိုင်)သခင်ကို အလ္လာဟ်က တမန်တော်တာဝန်နဲ့ ဘုရင်တာဝန်(၂)ခုစလုံး ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်က“၎င်းပြင် စုလိုင်မာန်သည် ဒါဝူဒ်၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်း(တမန်တော် စုလိုင်မာန်)က- အို---လူအပေါင်းတို့ ငါတို့သည်ငှက်တို့၏ဘာသာစကားကိုသင်ကြားပေးခြင်းခံခဲ့ရ၏။
မုချဧကန် ဤသည် အမှန်ပင်ထင်ရှားလှစွာသောကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်-ဟုပြောကြားခဲ့လေသည်။ထို့အပြင် စုလိုင်မာန်အဖို့ သူ၏တပ်များသည် ဂျင်န်(မမြင်ရသောဖန်ဆင်း ခံများ)၊ လူများနှင့် ငှက်များဖြင့် စုစည်းစေခြင်းခံခဲ့ရ၏။ ၎င်းတို့သည် အဆင့်အတန်းအလိုက် အစီAစဉ်တကျ စီတန်းစေခြင်း ခံခဲ့ကြရ၏။ ၎င်း(တပ်)တို့သည် ပုရွက်ဆိတ်တောင်ကြားသို့ ရောက်ရှိခဲ့သောအခါပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်က“အို-ပုရွက်ဆိတ်အပေါင်းတို့၊မိမိ၏တွင်းများထဲသို့ဝင်ရောက်ကြကုန်လော့။ စုလိုင်မာန်နှင့် သူ၏တပ်တို့သည် အသင်တို့အား မသိဘဲတက်နင်းမိကြလိမ့်မည်” ဟု ပြောကြားခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ၎င်း(တမန်တော် စုလိုင်မာန်)သည် ထိုပုရွက်ဆိတ်၏ စကားကြောင့် ပြုံးရယ်ခဲ့လေသည်။“အို---ကျွန်တော်မျိုး အားပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသော အရှင်မြတ်၊ ကျွန်တော်မျိုးနှင့် ကျွန်တော်မျိုး၏မိဘနှစ်ပါး အပေါ်အရှင်ပြုတော်မူခဲ့သောစည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ကျွန်တော်မျိုးအားကျေးဇူးသိတတ်စေတော်မူပါ။အရှင်မြတ်နှစ်မြို့တော်မူသည့် ကောင်းမြတ်သော အကျင့်များ ကိုလည်း ဆောက်တည်နိုင်စွမ်း ပေးသနားတော်မူပါ။ထို့အပြင် အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော် ဖြင့် ကျွန်တော်မျိုးအား အရှင်မြတ်၏သူတော်စင်အစေတော်တို့တွင် ၀င်ရောက်ပါဝင်ခွင့် ပေးသနားတော်မူပါ။” (ကုရ်အာန် ၊ ၂၇း၁၆-၁၉)
မန်သွိက် - သတ္တ၀ါအချင်းချင်း ဆက်သွယ်သောအခါအချင်းချင်း ဆက်သွယ်သောစကား တစ်ခုဖေါ်ပြတဲ့ အာယသ်လမ်းညွှန်တော်အရတမန်တော်စုလိုင်မာန်(အလိုင်)ရဲ့တပ်ထဲမှာဂျင်န်လို့ခေါ်တဲ့ အခိုးမဲ့မီးနဲ့ ဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့သူတွေ၊ မြေနဲ့ဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့ လူသား တွေ၊ လေပေါ်မှာပျံသန်းသွားလာနိုင်ကြတဲ့ ငှက်သတ္တ၀ါတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြင် ကုရ်အာန် (၃၄း၁၂-၁၄)အရ တမန်တော်စုလိုင်မာန်ဟာ လေကိုလည်း နိုင်တယ်။ကြေးနီကိုလည်း နိုင်တယ် စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ လူအပါအ၀င် သတ္တ၀ါတွေအချင်းချင်း သက်ဆိုင်ရာသဘာဝအလိုက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၁၄၀၀)ကျော်ကတည်းကဖန်ဆင်းရှင်က ကုရ်အာန်ထဲမှာ ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တမန်တော်စုလိုင်မာန်သည် “မန်သွိက်” ကိုနားလည်ခြင်းသိပ္ပံပညာကောင်းစွာမထွန်းကားခင်ကတိရစ္ဆာန်တွေစကားနားလည်တယ်ဆိုတာပုံပြင်ဒဏ္ဍာရီလိုပဲလက်ခံခဲ့ကြတာပါ။ လက်တွေ့မှာ လက်မခံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တမန်တော်စုလိုင်မာန်ဟာပုရွက်ဆိတ်မလေးရဲ့စကားကိုကြားပြီးသဘောကျလွန်းလို့ပြုံးရယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကုရ်အာန်ရဲ့ဖေါ်ပြချက်ကို တိုက်ရိုက်လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် ပုရွက်ဆိတ်တောင်ကြားဆိုတာပုရွတ်ဆိတ်သတ္တ၀ါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပုရွက်ဆိတ် (နမလ်) လို့အမည်ရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေ နေတဲ့တောင်ကြားကို ဆိုလိုတာပါဆိုပြီးတောင် ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ သတ္တ၀ါတွေ၊သစ်ပင်တွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့စနစ် တွေကို သိပ္ပံပညာကရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို ဆဲလ်၊ကလပ်စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ထားကြပါတယ်။ သစ်ပင်တွေဟာမရွေ့လျားနိုင်တဲ့ သက်ရှိဖြစ်လို့ သူတို့ကို ဖန်ဆင်းရှင်က အစိမ်းရောင်(ကလိုရိုဖီး) တွေပေးထားပြီး သူရှိတဲ့နေရာမှာ ရေ၊မြေ၊ လေ၊ မီး သဘာဝတွေကို စုပ်ယူပြီး အစာချက်နိုင်ကြပါတယ်။ သတ္တ၀ါတွေကတော့ ရွေ့လျားနိုင်ကြပါ တယ်။ သူတို့မှာလူသားလို ၀ိညာဉ် (Soul)နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား(Reason)၊ Aသိဥာဏ် (Intellect)၊ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် (Free-will) မရှိကြပါဘူး။ သူတို့မှာ သဘာဝအသိ (Instinct) သာရှိကြပါတယ်။ အဲဒီသဘာဝအသိနဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ် ထုတ်ပြန်ပို့ချတဲ့ ၀ဟီ လမ်းညွှန်ကို တစ်သွေမတိန်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးနေကြတဲ့အတွက် အစ္စလာမ်သာသနာကို ကျင့်သုံးနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်က သစ်ပင်တွေ၊ သတ္တ၀ါတွေကို ဥာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တတ်ရင် ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရဲ့သက်သေလက္ခဏာတွေကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသွန်သင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ပင်နဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေဟာသက်ရှိဖြစ်ပေမယ့် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပြုပိုင်ခွင့်မရှိကြလို့ သူတို့မှာ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိကြဘဲ ဂျန်နသ်(နိဗ္ဗာန်)နဲ့ ငရဲဆိုတာလည်းသူတို့အတွက် မရှိကြပါဘူး။
ပုရွက်ဆိတ်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်သောဘာသာစကားခေတ်သစ်သိပ္ပံရဲ့သုတေသနများအရ ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ အချင်းချင်းပုရွက်ဆိတ်သဘာဝနဲ့အညီ စကားပြောရုံသာမကမကြာခဏ အစည်းအဝေးတောင်ကျင်းပကြကြောင်း တွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ကောင် နဲ့တစ်ကောင် ဆက်သွယ်ချင်ရင် မိမိရဲ့အာရုံခံအတံနဲ့ ကျန်တစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းကို ပုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ တွေဟာ ဓါတုဗေဒနည်း၊ ထိတွေ့မှု၊ အသံ၊ အနံ့၊ အမြင်စတဲ့နည်းတွေနှင့် အချင်းချင်းဆက်သွယ်စကားပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒီ့အပြင် ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုရွက်ဆိတ်အိမ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပုတ်ခတ်ပြီး အသံတွေကိုလည်း ဆင့်ပြန်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ သူတို့အစာကို ရှာတွေ့ရင် သူတိုနောက်မှာဓါတု ပစ္စည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုတန်းလန်းချကြပါတယ်။ ဖေရိမုန်းစ်(Pheromones) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျန်ပုရွက်ဆိတ်တွေက မိမိတို့ရဲ့ အာရုံခံအတံ(antenna) တွေကို အသုံးပြုပြီးအဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း နောက် ကလိုက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ပုရွက်ဆိတ်လောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များစွာတွေ့ရှိ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာတွေက ပုရွက်ဆိတ်အမျိုးပေါင်း(း၈၀၀၀)လောက်ရှိတယ်။ အရွယ်အားဖြင့် (၀.၀၈) လက်မကနေ၂လက်မအထိ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ မိမိခန္ဓာကိုယ်ထက်အဆ(၂၀)ကျော်လေးတဲ့အလေးချိန်ကို မနိုင်ကြတယ်။ သူတို့ဟာအလွန်သန့်ရှင်းကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အာရုံခံအတံ (antenna)ကို သန့်ရှင်းဖို့ သူတို့ခြေထောက်လေးတွေကို သုံးကြတယ်။ သူတို့မှာရေမွှေးလို ထူးခြားတဲ့အနံ့တစ်မျိုးရှိကြတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်ဘုရင်မကဥတွေဥချလိုက်ရင် ပုရွက်ဆိတ်အလုပ်သမားတွေက ဥတွေကိုပါးစပ်က ကိုက်ချီပြီး နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ အထူးခန်းမှာ သွားထားကြတယ်။
ရန်သူလာရင်လည်း သွားပြီးကာကွယ်ပေးကြတယ်။ ကြီးမားတဲ့အစောင့်ပုရွက်ဆိတ် တွေရဲ့တာဝန်ကတော့ ပုရွက်အိမ်ကို ပတ်ချာလှည့်ပြီးကာကွယ်ဖို့ပါပဲ။ ပုရွက်ဆိတ်တပ်ကတော့ ပုရွက်ဆိတ်အုံ တစ်ခုမှာအကြာကြီးမနေကြပါဘူး။ စစ်သားတွေလိုလိုင်းစီပြီးချီတက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ် အကောင် တစ်သိန်းခွဲလောက်အထိ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်သေသွားရင်လည်း မြုပ်နှံလေ့ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေမှုစနစ်ကို အံ့ဖွယ်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မန်နေဂျာတွေ၊ကြီးကြပ်သူတွေ၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေသဘောပါပဲ။ အချင်းချင်းလည်း “Chat” စကားပြောလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ပစ္စည်းလဲလှယ်တဲ့ ဈေးသဘောမျိုးလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ သစ်စေးတွေကို သိုလှောင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီသစ်စေးတွေစိုစွတ်လာရင် နေရောင်ထဲထုတ်ပြီး ခြောက်သွေ့အောင် လုပ်ပေးလေ့လည်းရှိကြပါတယ်။ လမ်းပိတ်တာကိုမနှစ်သက်ဘဲအခြားလမ်းများ ရှာသွားလေ့ရှိပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ရဲ့ အံ့ဖွယ်ထူးခြားချက်တွေကို ဖေါ်ညွှန်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းတမန်တော်ကြီးစုလိုင်မာန်(အလိုင်)ပုရွက်ဆိတ်မလေးရဲ့စကားကိုကြားတော့ ၀မ်းသာအားရ ပြုံးရယ်ပြီးအနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာကို ဆင်ခြင်သတိရခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးတရားသိတတ်ပြီးအလ္လာဟ် အပေါ်မှာတာဝန်ကျေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ နှလုံးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်းတွေကို မောက်မာမှုအတွက်မသုံးဘဲအမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် အသုံးချနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတရားနဲ့ အမှန်တရားယှဉ်လာရင် အမှန်တရားကို ဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနဲ့ဆရာစကားကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့စကားဟာ အလ္လာဟ်နဲ့ တမန်တော်ရဲ့ စကားနဲ့ ဆန့်ကျင်နေရင်တော့ လိုက်နာဖို့တာဝန်မရှိပါဘူး။ ယဉ်ကျေးစွာပြန်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ကတော့ အလ္လာဟ်ရဲ့လမ်းညွှန် ကုရ်အာန် ကျမ်းကိုမှတ်ကျောက်တင်ပြီးတမန်တော်မုဟမ္မ(ဒ်) (ဆွ)ရဲ့စံနမူနဲ့အညီကျင့်သုံးကြဖို့ တမန်တော် ကြီး စုလိုင်မာန်ရဲ့ ဆုဒုအာကို နှလုံးသွင်းကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 3:49 PM No comments:
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ် တရားဟောစင်မြင့်များ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ရန် အဓိက နှိုးဆော်ခဲ့သူ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးသည် ယခုအခါ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဆွစ်ဇာလန်၏ အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလည်းဖြစ်သော အတိုက်အခံ ဆွစ်ပြည်သူ့ပါတီ (SVP) မှ ဩဇာကြီးမားသော နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒင်နီ ရယ်လ်စထရစ်ခ်ျ (Daniel Streich) သည် SVP မှ ဦးဆောင်စည်းရုံးသည့် အစ္စလာမ် တရားဟောစင်မြင့်များ တည်ဆောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ရေး ဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်အောင် အဓိက ကြီးမှူးနှိုးဆော်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။
Posted by Ordinary person at 8:54 PM 1 comment:
Please click the pictures to see clearly.
Posted by Ordinary person at 10:16 PM No comments:
- Islamic Dates/Day/Time/Place
12th or 9th Rabbi-ul-awal, Monday, Early in the morning (before sun rise) at Holy MAKKAH or
- English date/year
17th June 569. A.D or
- Hindi date date/year
1st of jaaith 3672 kul jug or
- Other Dates 1st year of elephant. (on40thday after elephant event) 2675th year to Prophet Noah's flood 2585th year to Prophet Ibrahimi year.
12th Rabbi-ul-awwal 11 hijrah, 23 Nabvi, 8th June, 632 A.D, At the time of chast (after sun rise) In Madina munawwarah In the house of Bibi Ayesha R.A. Burried in the house of bibi Aysha R.A Grave exactly where died in the room.
Total Life Span 63 years +0 month+4days+6 hours or total 22330 days or total 535924 hours. Stay in Holy Makkah - 53 years. Stay in Holy Madina - 10 years.
Syeda Safia R.A,
Um-e-Hakeem Baiza (Grandmother of Syedna Usman R.A), Aroohi, Ateka, Barrah, Amemmah
3. Syeda Um-e-Kulsoom married
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful This sermon was delivered on the ninth day of Dhul Hijah, 10 A.H. (632 A.D.) in the valley of Mount Arafat .
**Special thanks to Bashir Nuckchady and aunty Daw La' La' Myint.
Posted by Ordinary person at 12:38 AM No comments:
Wallahi you are
Until...Until Her Heart Finds Rest.
Verliy Beloved Are You,
until i got satisfied.
But I AM A LIVING PROOF
You are trully unlike dad.
May The Mercy Of Allah Rain Upon You.
More will come InshaAllah.
Ref : http://www.islamicpoem.com/?q=node/375
Posted by Ordinary person at 8:32 AM No comments:
Stay close my heart
to fill up confidence
Show me the reality
to stand in rights place
Guide me to speak
to spread your words
Give meabrave heart
to challenge liars
Stretch my time
to serve oness
Protect me from fire
to taste the stream of honey
Allah s.w.t. says in Surah Al-Baqarah verse 195
But do good; for Allah loves those who do good.”
Allah s.w.t. also says in Surah Al-A'raaf verse 56:
“for the Mercy of Allah is (always) near to those who do good.”